Grate agate no anarana ara-barotra, ireto dia tena chalcedony botryoidal - video
Tags agata, kalkedona, voaloboka
Grate agate no anarana ara-barotra, ireo tena chalcedony botryoidal ireo. Botryoidal dia midika fa kristaly kely boribory somary voaforona izay niforona miaraka.
Karazan-jiro botryoida na fitrandrahana mineraly dia iray izay ahitana ny mineraly manana endrika ivelany maneran-tany izay mitovy amin'ny voam-boaloboka. Ity dia endrika iray mahazatra amin'ny mineraly maro, indrindra ny hematite, ny endrika eken'ny sokajy. Izy io koa dia endrika mahazatra amin'ny goite, smithsonite, fluorite ary malachite. Anisan'izany ny chrysocolla.
Ny elanelana rehetra na voaloboka anaty mineraly botryoida dia kely kokoa noho ny mineraly reniformes, ary kely kokoa noho ny mineraly mamelà. Ny mineraly Botryoidal dia mipoitra rehefa tonga eo ny nuclei, eo akaikin'ny fasika, vovoka, na singa hafa. Ireo kristaly miavaka na fibrous dia mitombo amin'ny lafiny manodidina ny nuclei amin'ny lafiny mitovy, mipoitra toy ny spheres. Amin'ny farany, ireo spheres ireo dia mitafy na mifanena amin'ireo akaiky azy. Ireo valan-jaza akaiky ireo avy eo dia nakambana mba hamolavola ny sampahom-boasary.
Agate voaloboka - quartz volomparasy voasary Botryoidal
Ny Chalcedony dia endrika silika, bitika, miaraka amina quartz sy moganite tena tsara. Ireo mineraly silika roa ireo, saingy tsy mitovy ny ao amin'io quartz io dia manana rafitra kristaly trigonal, fa ny moganite kosa monoclinic. Ny rafitra simika fenon'i Chemcedony dia SiO₂.
Ny cholestony dia manjelanjelatra, ary mety ho semitranparenta na tsy misy dikany. Mety misy loko isan-karazany izy io, fa ny ankamaroan'ny olona hita ho fotsy kosa dia fotsy mavomavo, mavomavo manga na manga matevina manelanelana hatramin'ny fotsy ka hatramin'ny mainty. Ny loko ambaratonga amidy amidy dia matetika ampitomboina amin'ny fandroahana na fanasitranana.
Grate agate dikany
Ny agate misy voaloboka dia mampiroborobo ny fahatoniana anatiny sy ny fahatoniana ary ny fahamatorana. Ny fananany mafana sy miaro dia mandrisika ny fiarovana sy ny fahatokisan-tena. Izany dia ahafahan'ny fisaintsainana lalina sy henjana mandritra ny fotoana fohy. Grate agate dia kristaly nofinofy, inteition ary manankarena.
Agate voalavo avy any Indonezia
mividia agate voaloham-boaloboka ao amin'ny magazay
Blue agate lamba